Mitoetra ao amin’ny finoana – filazantsaramada
Mitoetra ao amin’ny finoana
Publié parfilazantsaramada	 janvier 31, 2014 février 14, 2014 Laisser un commentaire sur Mitoetra ao amin’ny finoana
« Ary nahita hazo aviavy anankiray teo amoron-dàlana Izy, dia nankeo aminy, kanjo tsy nahita na inona na inona teo aminy, afa tsy ravina ihany; dia hoy Izy taminy: Aza misy voa avy aminao intsony mandrakizay. Dia maina vetivety foana ilay hazo aviavy. » Matio 21:19
« Fa raha hiteny amin’ity tendrombohitra ity aza hianareo ka hanao hoe: Mifindrà ianao, ka mianjerà any an-dranomasina, dia ho tonga izany. » Matio 21:21b
Misamboaravoara ny fiainantsika ankehitriny. Feno faharatsiana etsy sy eroa, ary mahavaky fo sy mahavery fanantenana aza indraindray ka mitady hampilatsaka amin’ny famoizam-po. Ny fanahiana ny zavatra manahirana mety hitranga indraindray dia manampy ny efa tsy zaka ka mila hampipoaka ny loha! Ny zava-doza dia adino na dia ny mitodika amin’Andriamanitra aza! Izany rehetra izany dia miteraka fahakiviana, ary mety hampiraviravy tanana antsika, ka na ny zavatra tokony ho vita aza tsy vita! Io no sary asehon’ity aviavy tsy mamoa ity! Ny zavatra iray mety mamitaka antsika koa dia ny tsy fahafantarana ny tena sitrapon’Andriamanitra, noho ny tsy fandinihina tsara ny Teniny ary tsy mangataka ny fanazavàn’ny Fanahy Masina, ka voasarika amin’ny ivelambelany. Tsy ny tena fitiavana no mibaiko, ka toa voasariky ny fijerena olona sy ny fitsaratsàram-poana ny hafa, dia hadino ny mamantatra ny tena na mitoetra ao amin’ny finoana na tsia! Jesosy Tompo no manambara ny tenany ho foto-boaloboka, ka isika no sampana. Raha tafasaraka Aminy isika dia ho sampana maina, dia ariana sisa! Ny zavatra mampisaraka antsika amin’Andriamanitra dia toy ny tendrombohitra mibahan-toerana ao ampontsika. Inona moa izany tendrombohitra izany fa ny fahotana izay manakona antsika tsy hahita an’Andriamanitra! Raha mino isika, ka asaintsika mifindra any an-dranomasina io tendrombohitra io, dia hivarina any izy!
Mahafinaritra, sy maha-feno fiadanana ny mandre ny tenin’ Andriamanitra izay milaza ny teny fikasàna ho antsika. Hoy Izy amintsika: Aza matahotra hianao, fa efa nanavotra anao Aho; efa niantso ny anaranao Aho, Ahy ianao! Tsy miova izany Teny izany raha MIVERINA Aminy isika!
Ho aminao anie ny Tompo!
E-mail : lhmmad@orange.mg
Face book : Feon’ny Filazantsara
Raha nanoina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”.
Publié parfilazantsaramada janvier 31, 2014 février 14, 2014 Publié dansUncategorized
MPANDOVA NY FAHAMARINANA ARAKA NY FINOANA.